Mon, Jul 6, 2020 at 4:56am
काठमाडौं, २० साउन हाल सलमान खान आफ्नो हिट एक्सन फ्रान्चाइज ‘दबंग’को तेश्रो भागमा काम गरिरहेका छन्। सिनेमाको पहिलो भाग सन् २०१० मा रिलिज भएको थियो।सिनेमालाई डेब्यू निर्देशक अभिनव कश्यपले निर्देशन गरेका थिए भने निर्माता थिए उनकै भाइ अरबाज खान। हाल बनिरहेको ‘दबंग ३’ भने सो सिनेमाको प्रिक्वल हो। यस प्रिक्वलमा सलमान खान कसरी रविनहुड स्वभावको चुलबुल पाण्डे बन्छन् भन्ने देखाइनेछ। सिनेमामा उनको..
काठमाडौं, २० साउन। कम समयमा लोकप्रिय बनेकी नायिका हुन् बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हा। कमै मात्रामा बिवादमा आउँने सोनाक्षी दबंगबाट फिल्मी करिअरमा चम्किएकी हुन्। यतिबेला खासै उत्साहजनक छैन। उनले आइतबार दिएको एक अन्तरवार्ताको कारण आक्रोसित समुदायले उनको पुत्ला नै दहन गरेका छन्। सोनाक्षीले वाल्मीकि समाजबारे नकरात्मक टिप्पणी गरेपछि आक्रोसितहरुले उनको पुत्ला दहन गरेका हुन्। यता सोनाक्षीले भने आफूले अञ्जानमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको..
‘भद्रगोल’ किन रोकियो ?
काठमाडौँ, २० साउन टेलिभिजन र युटुबमा राम्रो दर्शक बटुल्न सफल हाँस्य सिरियल ‘भद्रगोल’को प्रशारण रोकिएको छ । यो हाँस्य सिरियल नयाँ आर्थिक बर्ष लागेसँगै प्रशारण भएको छैन । आखिर किन रोकियो त ‘भद्रगोल’ ? श्रृखला निर्देशक दीपक आचार्य भन्छन्–‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विज्ञापन एजेन्सीसँग सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अहिले भएको छैन । आन्तरिक कुराहरु नमिलेकाले हामीले सिरियल प्रशारण गर्न..
राखीले स्विकारिन् बेलायतमा बस्ने एनआरआईसँग गुपचुप गरेको बिहे
काठमाडौँ, १९ साउन । बलिउडकी 'कन्टोभर्सी क्विन' राखी सावन्तले आफूले गुपचुप बिहे गरेको स्वीकार गरेकी छिन् । शुरुमा उनले बिहे गरेको अस्वीकार गरे पनि अन्ततः उनले आफूले गुपचुप बिहे गरेको स्विकारेकी हुन् । हालै उनले एउटा अन्तर्वार्तामा आफूले विवाह गरेको खुलासा गरेकी हु न्। उनले भनिन्, 'म निकै डराएकी थिएँ, हो मैले विवाह गरेकी हुँ ।' उनले थप्दै भनिन्, 'मेरो श्रीमानको नाम..
वेब सिरिज ‘ट्वान्टि फस्ट लभ’ को दोस्रो सिजन शुरु
काठमाडौँ, १८ साउन युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय लभ स्टोरी जनरामा निर्मित वेब सिरिज ‘ट्वान्टि फस्ट लभ’को दोस्रो सिजन साउन २५ गतेदेखि शुरु हुने भयको छ । १ मिनेट ५६ सेकेन्ड लामो ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै सिरिजमा प्रेम, बिछोड र धोका देखाइएको छ। काठमाडौंमा शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी पहिलो सिजनको सफलतापछि ‘ट्वान्टि फस्ट लभ’को दोस्रो सिजन निर्माण गरिएको निर्माताको टिमले जानकारी दियको छ । विभोर पोखरेल..
बलिउड अभिनेत्री दीया मिर्जाकाे डिभाेर्स
नयाँ दिल्ली, १७ साउन । बलिउड नायिका दीया मिर्जाकाे डिभाेर्स भएकाे छ । दीया मिर्जा तथा उनका पति साहिलले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टमार्फत वैवाहिक जीवन टुंगिएको घोषणा गरेका हुन् । अभिनेत्री दीया मिर्जा तथा उनका श्रीमान् साहिल सांघाले आफ्नो वैवाहिक जीवन समाप्त गर्ने निर्णय गरेकाे खबर अधिकांशका लागि आश्चर्यजनक रह्यो, किनभने विवाह गरेको यत्तिका वर्षहरुका कहिले पनि यो जोडीको सम्बन्ध बिग्रिएको खबर एक..
क्याटरीना कैफका १० रोचक जानकारी, यो हो उनको वास्तविक नाम
काठमाडौँ, १६ साउन क्याटरीना कैफ बलिउडकी चर्चित अभिनेत्रीमध्ये एक हुन् । उनले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म ‘भारत’ ले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरेको थियो । फिल्ममा उनी सलमान खानको अपोजिटमा देखिएकी थिइन् । उनको ग्ल्यामर लूक र अभिनय दुवैको चर्चा हुने गर्छ । क्याटरीनाका बारेमा यी १० तथ्य जानकारी, जुन तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ: – सन् २००३ मा फिल्म ‘बूम’ बाट बलिउडमा कदम..
काठमाडौँ, १५ साउन हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खालको होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले महिला हरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि महिला भने बिहे भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन कारण एस्तो छ हेर्नुहोस । हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर..
नयाँ दिल्ली, १५ साउन । बलिउडका कमेडी नायक गोबिन्दाले ४९ वर्षकाे उमेरमा दास्राे विवाह गरेकाे खुलाएका छन् । उनले हालै भारतीय टिभी शो आपकी अदालतमा आफ्नो विवाहबारे रोचक खुलासा गरेका हुन् । केही वर्ष अघि गोबिन्दा त्यतिबेला चर्चामा आएका थिए जब उनले आफ्नी श्रीमती सुनितासँग एकपटक पुनः विवाह गरेका थिए । कार्यक्रममा गोबिन्दाले श्रीमतीसँग दोस्रो विवाह गर्नुको कारण खुलाए । आमाको इच्छा अनुसार गोबिन्दाले श्रीमतीसँग..
ब्रत अहिले आफ्नै लागि, बिहेपछि श्रीमानको लागि
काठमाडौँ, १५ साउन । तीज आउन एक महिना बाँकी रहेपनि रमझमले भने छोइसकेको छ । तीजका गीत धमाधम आउन थालेका छन् । मोडल नमिता खड्का पनि तीजको तयारीमा लागिसकेकी छिन् । उनी भन्छिन् ‘दर खाने, पूजा गर्ने ब्रत बस्ने योजना छ । बुझ्ने भएदेखि तीजको ब्रत छुटाएको छैन । अहिले त म आफ्नै लागि ब्रत लिन्छु, बिहेपछि श्रीमानको लागि लिनुपर्ला ।’ बिहे..
भक्तपुर, १४ साउन एकपछि अर्को गर्दै फ्लप फिल्म दिइरहेकी बलिउड अभिनेत्री परिणीति चोपडा सोलो हिट फिल्मा दिनका लागि आत्तिएकी छिन् । फिल्ममा पाएको असफलतापछि परिणीति बलिउडबाट गायबजस्तै बनेकी थिइन् केही समय ।झण्डै डेढ वर्षपछि उनी बलिउडमा फर्किन् । त्यसपछि चर्चा हुन थाल्यो । दावद ए इश्क, किल दिल, मेरी प्यारी बिन्दु, नमस्ते इङ्ल्याण्ड जस्ता फिल्म असफल भएपछि हराएकी परिणीति पछिल्लो समयमा भने..
काठमाडौं, साउन १४ । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीमाथि कडा प्रहार गरेकी छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै उनले केसीको व्यक्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएकी छन् । आफ्ना श्रीमान् विदोद मानन्धरले पोखरामा सुरेन्द्रलाई भेटेर आफू करिश्माको श्रीमान् भनेर परिचय दिएको प्रति उनले केहीदिनअघि मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै आलोचना गरेका थिए । उनको आलोचनाप्रति करिश्माको प्रश्न छ, ‘यदि करिश्मा केसीले आफ्नो जात..
काठमाडौँ, १४ साउन चलचित्र उद्योगमा व्यापार ओरालो लागिरहेका बेला कलाकारको पारिश्रमिकको पारो भने चढिरहेको निर्माता गुनासो गर्छन् । कलाकारले पारिश्रमिक बढाएकै कारण चलचित्र निर्माण गर्ने आँट गर्न नसकेको पुराना निर्माताहरुले बताइरहेका छन् भने नयाँ निर्माताहरु पनि कमैमात्रै दोहोरिने गरेका छन् । बजार र व्यापारको तुलनामा कलाकारको पारिश्रमिक महँगो भएको गुनासो एक पक्षबाट आइरहेका बेला स्वयम् कलाकार भने वैकल्पिक पेसा अपनाइरहेका छन् । बजारमा..
एजेन्सी, १३ साउन भारतीय संचार माध्यमले नेपालका महाननायक राजेश हमाललाई बलिउडका चर्चित अभिनेता अभिताभ बच्चनसँग तुलना गरेको छ। भारतीय संचारमाध्यम आजतकले महानायक हमालको बारेमा लेखेको एक लेखमा उनलाई अमिताभ बच्चनसँग तुलना गरिएको हो। आजतकमा 'ये हैं नेपाली सिनेमा के अमिताभ बच्चन' शीर्षकमा लेख लेखिएको छ। भारतमा संचालन हुँदै आएको 'कौन बनेगा करोडपति'लाई अमिताभ बच्चनले संचालन गर्दै आएका छन् भने नेपालमा केही समयअघिदेखि संचालन हुँदै..
स्विम सुटमा पन्जा लगाएपछि प्रिंयका बनिन् ट्रोलको शिकार
काठमाडौँ, १३ साउन फेसन र लुक्सको कारण चर्चामा छाइरहने बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पुन: एकपटक ट्रोलको शिकार भएकी छिन्। अभिनेत्री प्रिंयका चोपडा बलिउडकी फेसन आइकनको रुपमा परिचित छिन् । तर हालै उनको इन्स्टाग्राममा सेयर भएको फोटोका कारण उनको फेसन सेन्सलाई लिएर ट्रोल हुन थालेको छ । प्रियंकाले पति निक जोनससँग पिंक स्विम सुट लगाएको रोमान्टिक फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी थिइन् । उनले स्विम सुटमा..
काठमाडौँ, १३ साउन । बलिउड तथा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका चर्चित गायक उदितनारायण झालाईले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै अम्बोली प्रहरी चाैकीमा दुई हप्ता अगाडि उजुरी दर्ता गरेका थिए । उजुरीमा उनले आफूलाई एक व्यक्तिले एक महिनादेखि निरन्तररुपमा फोन गरेर नोक्सान पुर्याउने धम्की दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले ती व्यक्तिले आफूसँग पैसा भने नमागेको बताएका छन् । उजुरी दर्तासँगै प्रहरीले धम्की..
एजेन्सी, १२ साउन यतिबेला बलिउड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर अनन्या पाण्डेसँग मस्ती गरिरहेको छिन् । यहिबेला उनलाई एउटा भिडियोले थुप्रै महिनासम्म चर्चित बनाएको थियो । फिल्म शुभ मंगल सावधानपछि अभिनेत्री नेहा धुपियालाई दिएको अन्तरवार्ता निकै चर्चित भएको थियो । वास्तवमा ‘दम लगा के हईशा’ र ‘शुभ मंगल सावधान’ मा सँगै काम गरिसकेका आयुष्मान खुराना र भूमि पेडनेकर एक अर्काबारे धेरै नै जानकार छन्..
गीतकार अमर बान्तुको ‘अमर भावना २’ विमोचन
काठमाडौँ, ११ साउन गीतकार अमर बान्तुको श्रव्यदृश्यसहितको गीति एल्बम ‘अमर भावना २’ को आज राजधानीमा विमोचन गरिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा गीतकार शङ्करप्रसाद (एसपी) कोइराला र सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव श्याम तमोटलगायतले उक्त एल्बमको विमोचन गर्नुभएको थियो । उहाँको गीतमा साहिमा श्रेष्ठको स्वर तथा दीपक शर्मा र सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहेको छ । एल्बममा कलाकार आँचल शर्मा, अनुपविक्रम शाही र..
काठमाडौं, ११ साउन । पछिल्लाे केहि समय यता नेपाली नायिकाहरु बाेल्ड सिन तथा तस्विरहरू धमाधम बाहिर आइरहेका छन् । विशेष गरी नेपाली नायिकाहरु विदेश घुम्न जाँदा निकै विन्दास हुने र बोल्ड तस्विरहरु खिचाउने गरेका छन् भने कतिपयले फेसबुक, ट्वीटर र इन्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट तस्विरहरू सार्जनिक गर्ने गरेका छन् । भर्खरै मात्र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको बोल्ड तस्विरहरु बाहिरिएको थियो । उनको तस्विर..
सलमानको गुनासो : मलाई कसैले बिहेको प्रस्ताव राखेको छैन
एजेन्सी, १० साउन । बलिउड अभिनेता सलमान खान ५० वर्ष कटिसके । विभिन्न अभिनेत्री तथा मोडलहरूसँग उनको प्रेम चर्चा चुलिए पनि उनको बिहेबारे अनुमान लाउन मुश्किलै छ । सलमानले दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो बिहेबारे बोल्दै फ्यानहरूलाई अचम्ममा पारेका छन् । उनले अहिलेसम्म आफूलाई कसैले पनि बिहेको प्रस्ताव नराखेको बताएका छन् । फिल्मफेयरका निम्ति दिएको अन्तर्वार्तामा उनले फिल्म 'भारत'मा कटरिना कैफले आफूलाई बिहेको..
काठमाडाैं, १० साउन । निर्देशक छविराज ओझा र उनकी श्रमती तथा नायिका शिल्पा पाेखरेलबीच कलह शुरू भएपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै तातेकाे छ । छवि ओझा र शिल्पा पोखरेल काण्ड अहिले भाइरल नै छ। छविले कानको जाली फ्ट्ने गरी कुटेको भन्दै शिल्पाले प्रहरी परिसर, टेकुमा उजुरी दिएपछि उनीहरूको झगडा एक कान, दुई कान हुँदै मैदान भएको थियो। त्यसमाथि सहानुभूति बटुल्ने चक्करमा दुवैले युट्युबमा..
सामाजिक सञ्जालमा चर्चित रानी ! ४५ हजारको टिसर्ट, डेढलाखको ब्याग !
एजेन्सी, १० साउन । बलिउड अभिनेत्री रानी मुखर्जी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएकी छन् । मुखर्जी पछिल्लो साता आफ्नो महंगो टिसर्टका कारण सामाजिक सञ्जालमा उनि चर्चित भएकी हुन् । सामान्य टिसर्ट, पाइजामा र जुत्ता पहिरिएर एयरपोर्टमा झुल्किएकी रानीको उक्त पहिरनको तस्बिर समेत भाइरल बनाइएको छ । अनौठो त के भने, उनले लगाएको गुस्सी कम्पनीको टिसर्टको मुल्य ४५ हजार थियो । उनको शरीरमा देखिएका टिसर्ट, पाइजामा,..
काठमाडौँ, १० साउन । केही सेलिब्रिटी हुन्छन्, जो सकभर आफ्नो सम्बन्ध दुनियाँको नजरबाट लुकाएर राख्न चाहन्छन्। तर, केही सेलिब्रिटी साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहजस्ता पनि हुन्छन्, जो सकभर केही लुकाउनै नपरे हुन्थ्यो भन्छन्। उनीहरू प्रेमी मात्र होइन, प्रेमीसँगका एक–एक गतिविधि दुनियाँलाई देखाउँछन्। देखाउने चक्करमा कति देखाउने भन्ने चाहिँ ज्ञान हुन्न, अनि विवादमा पर्छन्। साम्राज्ञीका नयाँ प्रेमी देवांश राणासँगको बालीको समुन्द्रमा खिचिएको फोटोले अहिले यही दायरा..
नयाँ दिल्ली, ९ साउन । पछिल्लाे समय सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम युवा पुस्तामाझ मात्र नभएर वयस्क तथा वृद्धमाझ पनि लाेकप्रय नै छ । अहिले सामान्य मानिसदेखि सेलिब्रिटी यसमा व्यस्त देखिन्छन् । विशेषगरि, सेलिब्रिटीहरुले दैनिक आफ्नो तस्वीर इन्स्टामा पोष्ट गरेर आफ्ना फ्यानसँग जोडिएका हुन्छन्। तर, केही यस्ता सेलिब्रिटी पनि छन्, जसले इन्स्टाबाट करोडौ रकम कमाउँछन् । हालै मात्र सार्वजनिक भएको एक रिपोर्ट अनुसार बलिउड नायिका..
काठमाडौँ, ९ साउन । चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र उनकी कान्छी श्रीमती तथा अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । छविकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले प्रहरी कार्यालयमा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गराएपछि उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । मुद्दा दर्ता भएसँगै पक्राउ आदेश लिन प्रहरी काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो । अदालतले बुधबार नै पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न..
काठमाडौँ, ९ साउन । रोमानियन मोडल युलिया वन्तुर सधैँ बलिउड अभिनेता सलमान खानसँगको नजिकपनाका कारण चर्चामा रहन्छिन् । युलिया अहिले ३९औँ जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । यस अवसरमा सलमानले उनलाई खास उपहार दिएका छन्, हाल जसको चर्चा चुलिएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार सलमानले युलियालाई हिराको औँठी उपहार दिएका छन् । औँठी उपहार दिने आइडिया भने सलमानलाई उनकी आमा सलमाले दिएकी हुन् ।..
काठमाडौँ, ९ साउन । नेपाली जनकल्याण समिति कोलकाताले यस वर्षको २०६ औँ भानुजयन्ती पूर्वप्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गर्दैछ । कोलकातामा सन् १९९७ देखि भानुजयन्ती मनाउन थालिएको हो । कोलकाताको अलिपुर रोडलाई सन् २००७ देखि ‘भानुभक्त सरणी’ नामकरण गरिएको छ । यही साउन १२ गते कोलकाता हावडा मैदानमा हुने कार्यक्रममा कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल, संहिताशास्त्री अर्जुनप्रसाद बास्तोला, प्राज्ञ प्रा..
काठमाडौँ, ८ साउन दर्पणछायाका चकलेटी हिरो दिलिप रायमाझीको छोरी दिव्या रायमाझीले फिल्म खेल्ने समाचारले फिल्मी छेत्र केही समय तत्तायो । शिवहरि पौडेलको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘लक्का जवान’ मा दिव्याले डेब्यु गर्ने चर्चा केहि समय चल्यो तर अहिले सम्म न दिव्या नेपाल नै आईन न त फिल्म खेल्ने कुराको चुरो कुरो बाहिर नै आयो । बरु फिल्मको शुटिङ्ग युनिट फ्लोरमा जान तयार भैसके..
बलिउड अभिनेता रणवीर र अभिनेत्री आलियाको विवाह हुँदै…
मुम्बई, ९ साउन अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्टको बिहेको खबर चर्चामा रहेको छ । रणवीर र आलिया विगत केही समय पहिले देखी प्रेममा रहेका छन् । यी दुई जोडी अब आउने चलिचल ‘ब्रम्हास्त्र’ को सुटिङमा व्यस्त रहेका छन् । सुटिङमा दुवै सँगै हुँदा प्रेम झन् कसिलो बन्दै गएको छ । यी दुईको विवाहको बाधक बनेका आलियाका पिता एवं निर्देशक महेश..
काठमाडाैं, ८ साउन । प्रहरीले निर्माता छवि ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अशोक सिंह छवि र शिल्पाविरूद्ध अदालतमा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएपछि बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी ‍गरिएको हो। छविकी पत्नी हेमा ओझाले आइतबार महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा छविविरूद्ध बहुविवाहको उजुरी हालेकी थिइन्। उजुरीमा हेमाले आफूहरूबीच २०४१ सालमा विवाह भएको उल्लेख गर्दै छविले फेरि अर्की..
Results 913: You are at page9of 31